Aljeeriya - BBC News Somali
Posted at 7:20 19 Sebtembar 20217:20 19 Sebtembar 2021
Madaxweyne Butafliiqa oo xukunkiisa sanadaha badan uu dhaliyay dibedbaxyo ballaaran ayaa geeriyooday isagoo 84 jir ah.
Posted at 16:49 27 Agoosto 202116:49 27 Agoosto 2021
10 waddan oo dhaqaalahooda ugu badan ku bixiya inay hub soo iibsadaan
Sanadkii 2017-kii lacagta lagu bixiyo hubka ee caalamka waxay gaartay $ 1.7 tirilyan oo doolar.
Posted at 17:10 24 Luulyo 202117:10 24 Luulyo 2021
Fatxi Nuureyn oo u dhashay dalka Algeria kana qeybgalaya tartanka ciyaaraha Olimbikada ee ka socda Tokyo ayaa isaga haray tartanka kadib markii uu diiday in uu ka hortaggo ciyaartooy kale oo u dhashay Israa'iil.
Posted at 16:41 27 Abriil 202116:41 27 Abriil 2021
Hubkii ugu horeeyay ee Niyuukleer ee Afrika lagu isticmaalay oo uu buuq ka taaganyahay
Khilaafka weli ka taagan tijaabadii nukliyeerka ee Faransiisku ku sameeyey saxaraha dalkii uu hore u gumaysan jiray ee Algeria ayaa wali taaganoo saamayn taban ku leh xidhiidhka labada dal 60 sano iyo dheeraad ka dib.
Posted at 5:35 9 Oktoobar 20205:35 9 Oktoobar 2020
Dumarkii ka muddaharaadsanaa kufsiga iyo dilka
Dibadbaxyo ayaa lagu qabtay magaalooyin dhowr ah oo ku yaal Algeria si loo dalbado tallaabo lagu joojinayo rabshadaha ka dhanka ah haweenka ee kufsiga iyo dilka ah, kaddib markii ay sidaasi ku dhacday gabadh dhallinyaro ah.
Posted at 12:38 6 Oktoobar 202012:38 6 Oktoobar 2020
Gabadha kufsigeeda uu gilgilay waddan ka tirsan Carabta
Kiis ku saabsan kufsi iyo dil loo geystay gabadh 19 jir ah ayaa kala qeybsanaan dhinaca ra'yiga ah ka dhex abuuray shacabka waddanka Algeria, kaddib markii meydka haweeneydaas da'da yar laga helay gudaha kaalin shidaal oo ku taalla gobolka Boumerdes, ee bariga dalkaas.
Posted at 21:42 12 Disembar 201921:42 12 Disembar 2019
Doorashada Aljeeriya: Kumannaan qof oo ka qeybqaatay dibadbax ka dhacay Aljeris
Dadka dibadbaxyada ka dhigaya dalka Aljeeriya ayaa muddo dheer waxa ay dalbanayeen siyaasad cusub ee madaxweyne cusub un maysan rabin.
Posted at 2:41 11 Disembar 20192:41 11 Disembar 2019
Dowladda Aljeeriya oo xirtay laba ra'iisul wasaare oo hore
Posted at 15:07 28 Juunyo 201915:07 28 Juunyo 2019
Waxaa lagu tilmaamay ninkan soo badbaadiyay ilmahan yar halyeey.
Posted at 17:12 25 Juunyo 201917:12 25 Juunyo 2019
Carabta ma dhabarka ayay u jeedinayaan diinta?